Iminyuziyamu engaphansi kwamanzi evelele kunazo zonke emhlabeni | Izindaba Zokuhamba
Maria | | Ezokuvakasha, travel
Ulwandle luphethe amagugu amangalisayo agcinelwe labo abanesibindi sokungena ekujuleni kwalo ukuze bakuthole. Lapho akutholakali nje kuphela ukuthola ama-coral reef amahle, izidalwa eziyinqaba nezinsalela zemikhumbi eshonile, kepha futhi neminyuziyamu ethokozisayo eyenziwe ngabantu eyisimangaliso emehlweni abatshuzi. Ungalahleki ngaleso sikhathi umzila onqamula eminyuziyamu edume kakhulu ngaphansi kwamanzi emhlabeni.
3 ISIQHINGA SASEGranada
Izwe laseGibhithe elalikhukhulwe yizikhukhula nokuzamazama komhlaba esikhathini esithile esidlule, ikakhulukazi endaweni yaseDelta, ligcina ngaphansi kwamanzi alo enye yengcebo enkulu yokwakha eyaziwa ngabavubukuli: idolobha elicwilile eCleopatra.
Kutholakala osebeni lwe-Abukir Bay e-Alexandria, uchungechunge lokuzamazama komhlaba namagagasi amakhulu akhiqizwa ngokuba khona kwephutha lamanzi asuka eCairo aya eSicily akugwinya phakathi kweminyaka engu-320 no-1303 wesikhathi sethu.
Akuyona nje noma iyiphi indawo yokuvubukula. I-Alexandria ibingenye yamadolobha amakhulu endulo futhi yasungulwa ngu-Alexander the Great ngonyaka ka-332 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu. ICrossroads of Civilizations nayo yayinezimangaliso ezimbili zomhlaba wasendulo: iLabhulali kanye neLightouse yase-Alexandria.
Manje, ngemuva kokulala ngaphezu kwamakhulu eminyaka ayi-16, idolobha elicwilisiwe eliqhele ngamamitha ambalwa ukusuka ogwini lwamanje lolwandle lwase-Alexandria luphinde luvele. Amaqembu abavubukuli ehla ngemigwaqo yawo enesizungu ukuthola ingcebo esele icwile ethekwini selokhu ukuzamazama komhlaba kwagudla ugu maphakathi nezwe.
Kulezi zimali zaseMpumalanga yeMedithera kuye kwavela umcebo wama-sphinxes, ama-obelisks, izithombe kanye namakholomu. Noma kunjalo, Isigodlo sikaCleopatra siyigugu emqhele. Indawo ebiyelwe yangcwatshwa ngamanzi eyayingenye ye-nuclei ebaluleke kakhulu yenkathi yobu-Faro. Ukuvimbela lokhu kutholwa kungangeni ekulibalekeni, kubhekwa ukuthi kungenzeka yini ukufaka uhlelo lokucwiliswa okuvumela izivakashi ukuba zithuthwe kuphiko olwalucwilisiwe lwesigodlo futhi zihambe ngemigudu ye-fiberglass ukuze zihambele izindawo zamakhosi endlovukazi edumile.
Kancane kancane, idolobha elingaphansi kwamanzi liqala ukuntanta nenkazimulo yayo yakudala iyavela futhi. Konke kukhombisa ukuthi isigodlo sikaCleopatra sizoba yi-mecca entsha yezokuvakasha yaseGibhithe kanye nemipiramidi edumile.
Kokunye ukuphela komhlaba kutholakala imnyuziyamu yangaphansi kwamanzi i-MUSA (Underwater Museum of Art) emanzini azungeze iCancun, i-Isla Mujeres nePunta Nizuc. Izalwe ngo-2009 ngesandla sikaJaime González Cano (Umqondisi weNational Marine Park) uRoberto Díaz Abraham (uMongameli we-Asociados Náuticos de Cancún) noJason deCaires Taylor, umdwebi waseBrithani. Manje le ndawo ingenye yezindawo ezikhanga kakhulu ngaphansi kwamanzi emhlabeni, inezithombe ezingaphezulu kuka-500 zosayizi wokuphila unomphela.
Lesi sigcinamagugu esingaphansi kwamanzi ihlose ukukhombisa ukusebenzisana phakathi kobuciko nesayensi yokongiwa kwemvelo kanye nokuthanda ikoloni lokuphila kwasolwandle ukuze kutholakale nezixhobo zemvelo.
Isethulo sehlukaniswe ngemibukiso emibili ebizwa ngeSalon Manchones neSalón Nizuc. Owokuqala unamamitha ayisishiyagalombili ukujula, ulungele bobabili abatshuzi nababhukudi kanti owesibili unamamitha amane ukujula, ulungele kuphela ukubhukuda ngesikebhe.
Umdwebi uJason deCaires Taylor akayena oqalayo kulolu hlobo lwephrojekthi kusukela eminyakeni engaphambi kokubamba iqhaza ekwakhiweni kwe Ipaki Yokuqala Yangaphansi Kwamanzi esiqhingini saseGranada. Lapha sithola umsebenzi othi 'Viscitudes' (omele iqembu lezingane zezinhlanga ezahlukahlukene zibambene ngezandla futhi zenza umbuthano), 'Un-Still Life II', 'Inverted Solitude' kanye ne 'Alluvia', ukwakhiwa okwenziwe ngabesifazane ababili izibalo eziphenduke amakhemikhali omfula iCanterbury, e-United Kingdom.
Isiqhingi sase ILanzarote izosingatha imnyuziyamu yokuqala engaphansi kwamanzi eYurophungumqophi waseBrithani uJason deCaires Taylor. IMuseo Atlántico Lanzarote izotholakala ogwini oluseningizimu-ntshonalanga yesiqhingi, esikhaleni esiseduze naseLas Coloradas kumasipala waseYaiza, ohlangabezana nezimo ezinhle kakhulu zokufakwa kwayo njengoba ivikelekile emisakazweni emikhulu yasolwandle ethinta ugu olusenyakatho kusuka Lanzarote.
Futhi, U-2% wemali engenayo eyenziwe yilenyuziyamu engaphansi kwamanzi izoya ocwaningweni nokusatshalaliswa kokunotha kohlobo kanye nolwandle lwaseLanzarote.
Ugu olusenyakatho loLwandle iMedithera lwaziwa ngamabhishi amahle asuka e-Italy aye eFrance kodwa bambalwa abaziyo ukuthi phakathi kwamanzi iCamogli nePortofino kufihla lokho okuthiwa UKristu Wakwalasha, isithombe sethusi sikaJesu Kristu esikhokha intela kuDario Gonzatti, umtshuzi odumile wase-Italy owafa ngo-1950 ngesikhathi sokuntywila.
Umqophi uGuido Galletti wayefuna ukuhlonipha inkumbulo yakhe ngalesi sithombe esibabazekayo esingamamitha angu-2 esenziwe ngethusi futhi izandla zakhe zibhekiswe ebusweni bolwandle ukumema abatshuzi emthandazweni nasekuthuleni. UChrist of the Abyss wabusiswa nguPapa John Paul II ngo-2000 futhi yaba uphawu lwezenkolo oluthandwa kakhulu abadobi, abatshuzi kanye nabavakashi, ababefika njalo kule ndawo bezothandaza. Eqinisweni, ngo-Agasti 15 "udwendwe olungaphansi kwamanzi" luhlelwe esifanekisweni sale njongo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Ezokuvakasha » Iminyuziyamu evelele kunazo zonke engaphansi kwamanzi emhlabeni